Ny hetsi-panoherana ao Hong Kong imason’ny Filipiana iray mifindramonina hiasa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Aogositra 2019 5:39 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Nederlands, Română , Italiano, English
Dosien-tsarim-pivoriana filipino ao Central, Hong Kong manatontosa hetsika ara-kolontsaina tamin'ny Novambra 2018.
Mihoatra ny 130.000 ny isan'ny Filipiana ao Hong Kong, mpanampy an-trano ny ankamaroan-dry zareo. Maro no mivory ao Centrale, fon'ny fihariana sy ny mpaninjara, isaky ny alahady, handaniandry zareo ny antso tsy iasany. Eo ihany koa ny toerana itrangan'ny fihetsiketseham-panoheran'olona be dia be hatramin'ny Jona 2019. Miantraika tahaka ny ahoana ireny fivoriana ireny amin'ny fiainan'ny mpiasa nifindramonina? Inona ny eritreritry ry zareo momba ny fihetsiketseham-panoherana?
Hatramin'ny jona 2019 no mankaty, olona roa tapitrisa farafahakeliny izay no niara-dia tamin'ny fihetsiketseham-panoherana isa-kerinandro ao Hong Kong mitaky ny hamafana ny volavolan-dalàna iray izay ahafahana mampody ireo mpandositra sy ireo olontsotra voampanga any Shina Tanibe. Lazain'ny mpanao fihetsiketsehana fa mety hanimba ny demaokrasia ilay volavolan-dalàna amin'ny famelàna ny manampahefana any Beijing hisambotra ireo mpikatroka monina ao Hong Kong, ireo mpanivaka amin'ny fitenenana, eny fa na dia ireo mpanora-gazety mpitsikera aza. Efa nofoanan'ny governemanta ny volavolan-dalàna saingy mbola mitohy miitatra amin-javatra hafa ny fihetsiketseham-panoherana satria betsaka ny olona no mitaky ny hampiatoana ny herisetran'ny polisy, ny hamotsorana ireo mpikatroka voasambotra ary ny fiantohana ny fahazoan'ny rehetra (ampy taona) mifidy.
Tamin'ny alalan'ny imailaka ny Global Voices no niantsafa tamin'i Elena (tsy izay no tena anarany), Mpifindramonina hiasa efa niaina tany Hong Kong nihoatra ny folo taona. Mpirotsaka amin'ny tambajotra maro manandra-teny ho amin'ny zon'ny mpifindramonina miasa ihany koa izy.
Azavain'i Elena ny antony mahatonga ny ankamaroan'ny Filipiana mpifindramonina miasa ho milefaka amin'ny mpanao fihetsiketsehana:
Satria tanora ny ankamaroan'ny mpanao fihetsiketsehana, maro amin'izy ireo no nitombo tao amin'ny tokantrano ahitana Filipiana mpiasa an-trano mikarakara azy ireo raha mbola kely ry zareo.
Tsy mankasitraka ilay volavolan-dalana ihany koa ny vondrom-piarahamonina Filipiana. Tsy mbola nahita izahay olona na vondrona ka naneho ampahibemaso ny fanohanana azy iny. Nisy Filipiana ihany koa nanatevin-daharana ny diabe niainga avy ao Victoria Parka nankany amin'ny Central.
Raha tsy voarara izahay ny hanatevin-dahafana fivoriana, maro no misalasala noho ny mety ho fiantraikan'izany amin'ny asan-dry zareo sy ny satan'ny visa ao Hong Kong
Nisy fiantraikany amin'ny fivorian'ny Filipiana mpifindramonina miasa any sy ny fifaneraseran-dry zareo isak'alahady any amin'ny faritra ankalamanjana maro ny fivoriana. Zarain'i Elena no fomba nataon'ny mpifindramonina miasa manoloana ny toe-draharaha:
Maro amin'ireo vondrom-piarahamonina no nanafoana ny lanonana nomanin-dry zareo ao Chater Road [lalana Chater] noho ny fihetsiketseham-panoherana.
Nitatitra ny mpiasa sasany fa tsy miraikitra ho alahady intsony ny andro tsy iasan-dry zareo ary misy miankina amin'ny fotoana hisian'ny hetsi-panoherana izany. Misy fiantraikany ihany koa izany amin'ny fahafaha-miaraka amin'ny tapaka sy namana mandritra ny andro ialan-tsasatra. Ny mpifindramonina hafa indray mivory ny maraina mandra-pahatonga ny amin'ny roa ary mandao ny Central alohan'ny amin'ny telo folakandro mba ialàna amin'ny fihetsiketseham-panoherana sy izay mety ho fahatapahan'ny fitateram-bahoaka sy izay mety ho fifanandrinana amin'ny polisy.
Manahy ny sasany fandrao very asa:
Raha miezaka ny ho kaopy amin'ny hetsi-panoheran'ny vahoakan'i Hong Kong ny mpifindramonina miasa, misy koa mazava loatra ny tahotra ao amin'ny vondrom-piarahamonina filipiana amin'ny fiarovana aina sy ny fiarovana asa.
Misy ihany koa ny tatitra maromaro milaza fa manararaotra ny toe-draharaha ny mpampiasa sasany hitsipahana ny fahazoan'ny mpiasany andro fialan-tsasatra.
Nanamarika i Elena fa notsipahan'ny vondrona nifindramonina ny tolokevitry ny governemantan'i Filipina hametraka fandrarana vonjimaika amin'ny fandefasana mpiasa ho any Hong Kong:
Tezitra ny Filipiana mpifindramonina amin'ny fanitaran-dresaka ataon'ny governemantan'i Filipina amin'ny alalan'ny departemantan'ny tsenan'asa sy ny fampiasana olona amin'ny tolo-kevitra “handrara ny fandefasana” ny Filipiana tsy ho any Hong Kong. Hitanay ho setriny tafahoatra sy seraseram-bahoaka diso izany satria tsy mendrika politika fifehezana be toy izany ny toe-draharaha amin'izao fotoana izao. Raha tafapetraka ho ampiharina io tolo-dalàna io dia tsy ho voaaro izahay ary hiafara amin'ny fahaverezana ara-bola izany sady hanaisotra zavatra maro amin'ny fiainany sy ny hirika arakasa. Ny marina, maro no mahatsapa fa ny toe-draharaha any Filipina aza no mampidi-doza kokoa amin'ny fisian'ny lalàna miaramila mihatra any amin'ny faritra sasany sy ireo “tariky ny fahafatesana” mivezivezy manerana ny firenena sy manao ho lasibatra amin'ny nakapobeny ireo vondrom-piarahamonina mahantra sy mpiaro ny zon'olombelona.
Mahatsikaritra i Elena fa mahazo tatitra media tsara kokoa ny hetsi-panoherana tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny ‘Revolisiona Elo’ tamin'ny taona 2014. Saingy nomarihany ihany koa ny tsy fahafenoana tsara eo amin'ny fitateram-baovao:
Mifantoka bebe kokoa amin'ny fifanandrinan'ny mpanao fihetsiketsehana sy ny polisy ny fanangonam-baovao. Misy ihany koa ny fampisehoana diso tafahoatra ireo mpitan-tsainam-pirenena Etazonia sy Britanika ao anatin'ny fihetsiketsehana mahatonga azy hampihevitra fa manohana ny fidiran'i Etazonia sy ny fanjakana britanika ny vahoaka amin'ny ankapobeny nefa tsy izany loatra no izy. Ny mahatezitra kokoa ny olona dia ny fomba fitantanan'ny governemanta HKSAR (Fitantanam-Paritra Hong Kong Manokana] ny toe-draharaha indrindra fa ny herisetran'ny polisy sy ny fampiasan-kery be loatra eo amin'ny fifampiraharahana amin'ny mpanao fihetsiketsehana.
Farany, manana tolo-kevitra ho an'ny mpanao fihetsiketsehana i Elena:
Manaova fisantaran-draharaha hanetsika ireo mpiasa tsotra amin'ny fampifandraisana ny tolona ho famahana ireo olana fototra hafa manindry ny tontolon'ny mpiasa ao Hong Kong toy ny fahakelezan'ny karama, ny fahalafosan'ny hofantrano be tafahoatra, ny fihasimban'ny servisy sosialy indrindra fa eo amin'ny fahasalamana, ny fanabeazana ary ny fikarakarana ny beantitra.
Raha hamaky bebe kokoa ny momba ny fihetsiketsehana ao Hong Kong ho fanoherana ny fampodiana voampanga, tsidiho ny pejy fitantarana manokana ato amin'ny Global Voices.